Home best online casino bonus codes eu slot machine trick borderlands 2
Otu ndi otu egwuregwu di iche iche nke Naijiria na Senwes Park, Potchefstroom, South Africa choro Sierra Leone site na 137 iji nweta mmeri nke U-19 nke World Cup Qualifier Afrika Division.
Naijiria nwere ngwụcha izu nke kụrụ Tanzania na otu n’ime semifinals iji ruo eruo 2020 ICC World Cup. Ọ na-akwụkwa ọkwá otu ahụ na Division One cadre.
The Junior Yellow Yellow meriri Mozambique, Lesotho na Ghana na Group B na-aga n’ihu na-aga n’ihu tupu ha ebute Tanzania site na ịgba ọsọ asa na iri abụọ iji ruo eruchaa.
Ụnyaahụ, onye isi ụgbọ mmiri Slyvester Okpe buru ụzọ merie 242 na-agba ọsọ maka mpempe akwụkwọ itoolu n’ime iri ise na ise na-eme ka onye na-egwu egwu na-emeghe ọkpụkpụ, Olayinka Olaleye. Olaleye kwuru 110 agbapu 124 bọọlụ, Samuel Mba 62 gbara ọsọ na dike, Segun Ogundipe gbakwunyere 29 ọsọ.
Onye uwe ojii kacha mma nke Naijiria, nke a na-akpọ Peter Aho, mere ka ọ bụrụ na ọ na-ekwu na ọ bụ ise wickets, 35 na-agba ọsọ, otu nwa agbọghọ dị anọ, mgbe onye duo nke Mohammed Taiwo na Abdulrahman Jimoh kwuru na ha abụọ wickets iji belata ndị iro ha na 31 n’elu.
Ndi Sierra Leone na nzaghachi na ihe egwu Naijiria edere na mbu ndi ozo choro na o siri ike imeri onu ogugu kama ndi ochichi nke Captain George Ngeba (31), Osman Sankoh na Emmanuel Akpo gbara 14, mgbe Haroun Kamara gbakwunyere 13 ke ndutụhọ ndutụhọ ke n̄kan̄ emi ekenyenede ke kpukpru mbon en̄wan emi tutu esịm ini emi mmọ ẹkebode Nigeria ke akpatre.
Sierra-Leone na Tanzania, bụ ndị meriri egwuregwu nke atọ, kwalitekwara na Division One, ebe ha ga-eche Namibia, Kenya na Uganda ihu.
N’iji aka na mmeri, Nigeria Cricket Federation (NCF) President, Prọfesọ John Ukwneya kwuru na ndị otu kwesịrị ịnweta ihe ngosi niile n’egwuregwu. O kelere Nkuzi ahu, nke Uthe Ogbimi na Tamuno John duziri, ka ha wee nwee mmeri.
“Ụmụ nwoke ahụ raara onwe ha nye nke ọma ma dọọ ha aka ná ntị ọ bụ ezie na usoro nke ihe omume ahụ. Oge abughi oge ememe n’ihi na anyi nwere ndi otu ndi otu n’oru, ndi ozo n’oru ndi ozo tupu iko iko nke uwa ebe anyi ga – eche ihu dika mba England, India, Pakistan, South Africa na mba ndi ozo di elu, “ka o kwuru.
N'ETITI JAMB NA IHE DI ADI NKE OGHERE NA-ANABATAGHI